Fiantraikany amin'ny fiainana an-dranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Heverina ho toy ny a fahasalamana ny ahiahy, ny fiantraikan'ny maloto tsy tantin'ny fitantanana sy ny fanadiovana tsy maloto amin'ny fiainana an-dranomasina dia tsy nankasitrahana loatra ary tsy noraharahaina. Ny fandotoana ny rano maloto dia misy vokadratsiny manimba amin'ny haran-dranomasina sy ny karazan-trondro. Ny famoahana otrikaina mitohy sy ny voninkazo algoma dia manimba manokana ny fiainana an-dranomasina ary mitombo isa sy refy.
Fiantraikany amin'ny haran-dranomasina
Fanamainana coral ary aretina dia olana iraisan'ny haran-dranomasina maloto amin'ny loto maloto. Ny fahalotoan'ny rano maloto koa dia mety hisy fiantraikany amin'ny fianana an-dranomasina amin'ny alàlan'ny fanovana ny mari-pana amin'ny ranomasina, ny pH ary sira ary koa ny fitomboan'ny aretina amin'ny zavamananaina maro, toy ny haran-dranomasina, trondro ary trondro. Ny sasany amin'ireo adin-tsaina mahazatra hita any amin'ny rano maloto sy ny fiantraikany amin'ny haran-dranomasina dia voatanisa eo amin'ny latabatra etsy ambany (namboarina tamin'ny Wear and Vega-Thurber, 2015).
VOKANY AMIN'NY KORALS
zavatra mahavelona Fampitomboana ny famaohana ny haran-dranomasina, ny fitomboan'ny aretina amin'ny haran-dranomasina (ny fihanaky ny aretina ary ny hamafiny), ny fihenan'ny haran-dranomasina, ny firoboroboan'ny algaly, ny fihenan'ny haran-dranomasina, ny fihenan'ny haran-dranomasina sy ny zava-manan'aina ary ny fiakaran'ny aloky ny fitoplankton.
Mpanakorontana endocrine Ny fihenan'ny amboaram-borona atody, ny fihenan'ny tahan'ny haran-dranomasina, ny fihenan'ny vatan'ny vatohara.
otrikaretina Loharanon'ny pathogen aretin'ny pox fotsy ho an'ny haran-dranomasina sy ny fahafatesan'ny olona mifandraika amin'izany, ary ny fitomboan'ny pathogenisialy amin'ny haran-dranomasina.
Solids Mihena ny fotosintesisan'ny vatamanga, ny harena manan-karena amin'ny haran-dranomasina, ny taham-pitomboan'ny haran-dranomasina, ny fikajiana ny haran-dranomasina, ny fisaronan'ny haran-dranomasina ary ny tahan'ny fiakaran'ny haran-dranomasina ary ny fitomboan'ny fahafatesan'ny vatohara.
Heavy metaly Ny fahafatesan'ny haran-dranomasina, ny fanadiovana ny haran-dranomasina, ny fihenan'ny asa fototra toy ny fahombiazan'ny fifohana rivotra sy ny zezika; Ny Fe2 + dia mety hampitombo ny fitomboan'ny aretin'ny haran-dranomasina.
poizina Ny voka-dratsin'ny mahafaty sy ny ambany amin'ny vatohara - miovaova be ary miankina amin'ny poizina manokana. Mihena ny fotosintesisan'ny vatamanga, ny famaohana ny haran-dranomasina, ny fahafatesan'ny haran-dranomasina, ny fitehirizana ny lipid coral, ny fihenan'ny fecundity ny vatohara, ny fahafatesan'ny coralts coral, ary ny fihenan'ny fitomboan'ny haran-dranomasina.
Ny voninkazo algaly dia mamaky ny fidirana amin'ny tara-pahazavana takian'ny zooxanthellae fotosintetika amin'ny vato harana. Ny oksizenina dia takiana ary hiteraka amin'ny fotosintesis ary koa ny fifohana rivotra sy ny fikajiana ary noho izany dia ilaina amin'ny fahaveloman'ny haran-dranomasina.
Ny hypoxia dia naseho fa miteraka fihenan-drà. Ny voka-pikarohana sy ny hamafin'ny fampidiram-bola dia mihabetsaka amin'ny fandotoana rano maloto, ka miteraka fahasimbana sy fahafahan'ny vatohara fanarenana. ref Fandotoana rano maloto eto an-toerana paikady fanalefahana ny fanamafisana ny faharetana amin'ny fanalefahana vato harana dia manakiana hatrany. ref
Loza iray hafa koa ny aretin'ny haran-dranomasina noho ny fahalotoan'ny rano maloto. Ny fihanaky ny roa amin'ireo aretina haran-dranomasina fahita indrindra dia mifandray amin'ny fandotoana. Ohatra, ny pox fotsy dia vokatry ny pathogen moka avy amin'ny olombelona Serratia marcescens, raha ny aretin'ny tarika mainty kosa dia mifamatotra mafy amin'ny firakotra makroalgal izay mitombo ao anaty rano maloto. ref Ankoatr'izay, ny fandalinana natao tato ho ato dia nampiseho fa mora voan'ny aretina sy mihalefaka rehefa tratry ny otrikaina mifandraika amin'ny rano maloto. ref
Fiantraikany amin'ny trondro sy akorandriaka
Ny otrikaina, mazàna avy amin'ny loharano miorina amin'ny tany toy ny rano any amin'ny fambolena na rano maloto, dia vato manorina ho an'ny fiainana an-dranomasina. Na izany aza, ny otrikaina be loatra amin'ny tontolo iainana an-dranomasina dia miteraka voninkazo algaly afaka manafotra ny velaran'ny rano, manakana ny tara-masoandro ary manelingelina ny fotosintesis, ary mandray anjara amin'ny fiakaran'ny marin-dranomasina sy ny fanamorana. Ny firoboroboan'ny algaly dia manolotra fifaninanana ho an'ny haran-dranomasina ary afaka manakana ny fanarenana aorian'ny tranga maty sy aretina. Aorian'ny fahafatesan'ny ahidrano dia mandany oksizenina ny lo azy ireo ary mampihena azy amin'ny rano ary mahatonga azy tsy ho azon'ny fiainana an-dranomasina hafa. Io eutrofication io dia mamorona faritra maty, miavaka amin'ny ambaratonga oksizenina voarehitra ambany, izay vinavinaina hitombo matetika sy hamafin'ny fiovan'ny toetrandro. ref Ity sary eto ambany ity dia mampiseho an'io fomba io amin'ny antsipiriany bebe kokoa, manomboka amin'ny fidiran'ny otrikaina ary mitarika mankany eutrophication, hypoxia, ary tranga mety maty.
Ny fizotrany izay mandray anjara amin'ny fihenan'ny oksizenina voarindra sy ny fiantraikan'ny hypoxia manaraka eo amin'ny fiainana an-dranomasina (sary havia). Ny fihenan'ny hypoxia sy ny bakteria dia misy fiantraikany amin'ny fiainana an-dranomasina amin'ny ambaratonga trofika. Ireo karazan-trondro lehibe kokoa dia mitaky oksizenina voaroba avo kokoa raha ny microfauna, toy ny kankana, kosa dia mahazaka ny haavon'ny oxygen ambany. Mitranga ny faritra maty rehefa mihena ny hypoxia (sary ankavanana) ny sisa velona amin'ny toeram-ponenana. Loharano: Boesch 2008
Ny fahalotoan'ny rano maloto sy ny otrikaina be loatra ao amin'ny ranomasina dia mitarika amin'ny famokarana poizina izay manimba ny tsy fivadihan'ny tontolo iainana sy ny fiainana an-dranomasina ary ny fahasalaman'ny olombelona. ref Ny karazana ahidrano isan-karazany dia miteraka poizina isan-karazany, izay miteraka hatraiza hatraiza sy ny fiantraikany. Ireo poizina ireo bioaccumulate, miorina amin'ny tsiambaratelon'ny zavamananaina manerana ny tranokala sakafo. Miara-miasa amin'ny photosynthesis manelingelina, ny poizina mampidi-doza dia miteraka fepetra izay tsy azo onenana amin'ny trondro sy akorandriaka tena ilaina amin'ny tranokala sakafo an-dranomasina sy ny fiveloman'olombelona. ref
Ny valin'ny fiainana an-dranomasina amin'ny hypoxia malefaka sy mafy, ao anatin'izany ny fiovan'ny fizotra ara-batana, ny safidin'ny toeram-ponenana ary ny sisa velona. Fanamarihana: ny BBD dia midika ho aretin'ny tarika mainty. Loharano: Nelson sy Altieri 2019
Ho fanampin'ny poizina ateraky ny ahidrano, maro hafa no ao anaty rano maloto. Anisan'izany ny fanafody, toy ny disruptor endocrine sy ny synthetic synthetic, izay tsy nesorina nandritra ny fitsaboana. Amin'ny fihinanana ireo poizina ireo, ny zavamiaina an-dranomasina dia mety ho lasa poizina hohanin'ny olombelona ihany koa, ary manome zava-dehibe loza ara-pahasalamana ho an'ny olombelona ankoatry ny fandrahonana ny fahaverezan'ny harena voajanahary. Jereo ny fanadihadiana tranga avy any Puako, Hawaii izay nanondroana ny fahalotoan'ny rano maloto ho mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny fihenan'ny biomassa trondro ary niasa ny fokonolona hamantatra sy hamahana ny loharanon'ny loto maloto.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSimika amin'ny ahiahy mipoitra (CECs) Ny CEC dia hita matetika kokoa amin'ny rano maloto voadinika sy amin'ny fatrany avo kokoa. Ireo akora simika ireo dia misy fitambarana hita ao amin'ny fanafody sy vokatra fikarakarana manokana ary tsy esorina amin'ny alàlan'ny fomba fitsaboana rano maloto ankehitriny. Ny antidepressants dia naseho fa misy fiatraikany amin'ny fitondran-trondro sy ny fahafatesan'ny olona amin'ny ambany fifantohana, raha ny hormonina sentetika sy ny mpanelingelina endocrine kosa dia mety hanimba ny fiterahana indray ary handray anjara amin'ny fironana mahery setra. Ho fanampin'izany, ny fahavelomana amin'ny ankapobeny dia simba amin'ny trondro tratry ny rano maloto amin'ny rano maloto. Ny fandalinana vao haingana dia mampiseho ny fitambaran'ny biolojika ny fitambaran'ny CEC maro ao anaty vatan-trondro ary miteraka ahiahy amin'ny tsy fahampian'ny fahazoana sy ny fikarohana ny fiantraikan'ny CEC amin'ny fiainana an-dranomasina.